Pacman: ny fomba filalaovana tsikelikely
Mila milalao kite amin'ny Internet maimaim-poana, mila fotsiny ianao araho tsikelikely ireto torolalana ireto:
Sokafy ny tranokala tianao ary mankanesa any amin'ny tranokalan'ny lalao Emulator.online.
Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Ianao ihany no tokony hilalao kilalao ary azonao atao izao ny manomboka mifantina ny fikirana tianao. Raha vao mandresy lalao ianao dia afaka miakatra. Misy ambaratonga efatra amby roapolo total.
Ankehitriny, hahita bokotra ilaina ianao. Afaka "Manampy na esory ny feo", Omeo ny bokotra"Play"Ary manomboka milalao, azonao atao"Pause"sy"reboot"Na oviana na oviana.
Mahavita mihinana ny vatomamy tsirairay nefa tsy hohanina.
Aorian'ny famenoana lalao iray dia kitiho "Haverina velomina" manomboka indray.
Pac-Man dia mpilalao lalao malaza be hatramin'ny taona XNUMX. nisy natolotra tamin'ny planeta tamin'ny lalao video tany amin'ny firenena Japoney ny 1980 Mey XNUMX. Tonga tany Etazonia ny lalao 5 volana taty aoriana ary nahatratra 000 XNUMX ny marika amidy.
Ankoatry ny kinova arcade, Pac-Man koa dia namboarina ho an'ny XNUMX Atari. Nandritra ny taona maro, ny lalao dia nahazo kinova fanavaozana am-polony sy am-polony maro ho an'ny konsole maoderina indrindra. Tany Brezila, fahombiazana ihany koa ilay mpilalao nanjary fantatra amin'ny anarana hoe Come-Come.
Ambonin'ny zavatra tsirairay, ny hevitra momba ny lalao dia ny fanaraha-maso ny karazan-komana mavo mihinana takelaka ao anaty labozia. Mandritra izany fotoana izany, ny mpilalao dia tsy maintsy mandositra mpijery 4 manandrana mandresy azy.
Namco fehezan-teny hafa amin'ny lalao shooter i Namco, niray feo tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny voalohany, hitan'i Iwatami fa nanana aingam-panahy ho an'ilay mpilalao izy tamin'ny fahitana pizza tsy nisy silaka.
Na izany aza, ny niandohan'ny toetra dia misy dikanteny hafa. Raha ny filazan'i Iwatami ny tenany, ny fisehoan'ny papango dia aingam-panahy tamin'ny fanoratana Japoney ny teny hoe "kuchi", vava.
Raha vantany vao noforonina izy dia fantatra amin'ny anarana hoe papango. Amin'ny fiteny japoney dia mitovy tanteraka ny tsipelina puck sy pac, paku. Araka ny anganon'ny firenena, fantatra fa nanana filan-dratsy i Paku. Ho fanampin'izany, ny teny dia miasa toy ny onomatopoeia hanokatra sy hanidy ny vava rehefa misakafo.
Etsy ankilany, ny anarana hoe Puck dia toa feo taco amin'ny teny anglisy. Ka rehefa nentina tany Etazonia ny lalao dia nofidian'i Namco antsoina hoe Pac-Man izany.
Na dia natomboka voalohany tany Japon aza izy io, dia tamin'ny fahatongavany tany Etazonia no namela ny marika teo amin'ny kolontsaina pop. Ny fahombiazan'ny lalao dia nahagaga fa tamin'ny rariny ihany folo taona ny famoahana dia mitentina dolara amina miliara, ao amin'ny efitranon'ny lalao any Etazonia ihany.
Nandritra ny folo taona manaraka, nitombo avo roa heny ny sandany, nahatratra 500 tapitrisa dolara amerikana. Androany, ny franchise dia nanangona efa ho telo ambin'ny folo miliara manerantany. Midika izany fa ny Space Invaders ihany (izay manana vola efatra ambin'ny folo miliara dolara amerikana) no mihoatra an'io ao amin'ny lisitry ny tombony be indrindra eto an-tany.
Hatramin'ny kinova voalohany tao amin'ny arcades, Pac-Man dia nandresy tohiny telopolo mahery. Ilay toetra amam-panahy dia mbola miseho ihany amin'ny lalao mihoatra ny franchise nataony. Ao amin'ny Super Smash Bros, ho ohatra, ny baolina mavo dia azo fidina ho iray amin'ireo mpiady.
Inona ilay Pacman?
papango dia lalao elektronika noforonin'i Tōru Iwatani ho an'ny orinasa Namco. Namboarina voalohany ho an'ny Arcade tamin'ny taona 80, dia lasa iray amin'ireo lalao nilalao sy nalaza indrindra izy io ankehitriny, miaraka amin'ny kinova maoderina ho an'ny console sy tohiny maro ho an'ny maro hafa.
Lalao tsotra be io: ny mpilalao dia a loha boribory misy vava izay manokatra sy mikatona, apetraka ao anaty maze tsotra feno takelaka sy mpijery efatra nanenjika azy. Ny tanjona dia mihinana takelaka tsirairay nefa tsy voan'ny matoatoa, amin'ny taha be pitsiny.
Pac-Man dia iray amin'ireo mpilalao malaza indrindra sy fanta-daza amin'ny console lalao amin'ny taona XNUMX. Porofon'izany ny lazany na eo amin'ireo faralahy aza, izay tsy nilalao ny lalao akory.
Ary raha mpankafy an'io toetra mavo kely feno fitsiriritana io ianao dia zahao ireo zavatra tsy dia misy dikany mahaliana momba ny franchise nataony.
Ny tanjona amin'ny lalao dia mihinana tsirairay ny taila maze nefa tsy voan'ny matoatoa. Rehefa mifandona amin'ny takelaka iray, ny papango mitelina azy ary tsy maintsy miala amin'ny maze. Raha mihinana taila iray ao anaty maze ny mpilalao dia mandalo ny sehatra ilay mpilalao. Raha mihinana ny tsirairay ny kileza amin'ny mpilalao sy ny maze maimaimpoana ny mpilalao dia mandresy amin'ny lalao izy.
Ny hany hetsika fehezin'ny mpampiasa dia ny mihetsika amin'ny alàlan'ny lakilem-pitodihana mankany aloha, miatrika miverina, havia sy havanana, miaraka amin'ny fikasana hisoroka ny mpijery sy hihinana ireo takelaka miparitaka manodidina ny maze.
Rehefa misy mifoka mifandona papango maty, ka namoy ny ainy. Manana fiainana roa fanampiny ilay mpilalao, izay aseho eo amin'ny bara farany amin'ny efijery. Rehefa mamoy ny ainao sy mampiasa fiainana fanampiny ianao, ny isan'ny pilina sisa tavela amin'ny dingana dia mijanona tsy miova hatramin'ny fotoana nahafatesan'ny papango, miverina amin'ny toe-javatra voalohany amin'ny dingana ny tsirairay.
Amin'ny tranga toy izany, hamenoana ny sehatra (na ny lalao), ny mpilalao ihany no mila miahiahy momba ny takelaka sisa tavela. Rehefa mamoy ny ainy ilay mpilalao amin'ny fifandonana amin'ireo mpijery dia resy ny lalao.
Ny hafainganam-pandehan'ny fampisehoana ary ny papango dia mitovy tanteraka, fa, toy ny tamin'ny lalao tany am-boalohany, ny tablette super dia mampiadana ny fampisehoana amin'ny isa isan-jato ary avelao ihany koa ny Pacman nandany azy ireo.
Rehefa nohanina izy ireo dia ny "mason'ny matoatoa" sisa no mijanona, izay tsy maintsy miverina eo afovoan'ny labirinina, izay toerana sisa tavela amin'ny sombin-kavina ho mpanafika indray Pacman. Isaky ny sehatra tsirairay dia misy takelaka efatra lehibe. Ny mpamorona dia mamaritra ny faharetan'ny takelaka super.
Ny takelaka nofongorana tsirairay dia mitentina isa folo, ny takelaka lehibe voatelina tsirairay dia mitentina isa zato, ary ny hala-bato lanin'ny tsirairay dia lanja roanjato. Ny lalao dia tsy maintsy maharitra farafahakeliny 2.
Rehefa namorona ny lalao i Toru Iwatani dia naniry ny hitaona ny vehivavy mpihaino ho amin'ny endrika tsy dia mahery setra sy mahery setra. Na eo aza izany, ny efitranon'ny lalao dia mitohy toerana malalaka ho an'ny lehilahy. Noho izany, ny mpamorona dia mila mamorona safidy vaovao hafa.
Na izany aza, niraraka tampoka ny vahaolana. Ny fahombiazan'ny Pac-Man dia nanentana ny famoronana ny lalao Crazy Otto. Miaraka amin'ny lalao mitovy amin'ny azy sy ny kinovan'ny vehivavy an'ny primal character dia tsy nisy ifandraisany amin'i Namco ny lalao.
Ka, Midway, izay manan-jo hanana Pac-Man any Etazonia, niafara tamin'ny fividianana an'i Crazy Otto ary famoahana azy tamin'ny anarana hoe Ramatoa Pac-Man. Nitondra fanavaozana toy ny maze vaovao sy hafainganam-pandeha bebe kokoa ny lalao.
Fotoana fohy taorian'ny fahombiazan'ny lalao dia nahazo vahana tamin'ny haino aman-jery hafa ny franchise. Tao anatin'ny roa ambin'ny folo amby sivifolo, ilay mpilalao dia nahazo ny kinova ho an'ny andiany mihetsika antsoina hoe Fanaviana Pac-man. Ny endrika dia novokarin'i Hanna-Barbera, tompon'andraikitra amin'ny marika nentin-drazana toy ny Flintstones sy Jetsons.
Ho fanampin'izany, ny toetra no biby fiompy voalohany an'ny lalao video. Hatramin'ny fisehoany voalohany, dia manana vokatra marika toy ny saribakoly, T-shirt, kitapo kitapo ary maro hafa. Vetivety dia lasa iray amin'ireo anarana lalao fantatry ny maro indrindra ivelan'ny haino aman-jery.
Ary farany, ny fiatraikany eo amin'ny tontolon'ny lalao dia na ny mpanoratra ny GTA aza dia nilaza fa mitovy ny lalao papango. Raha ny filazan'ny mpamolavola, ny lalao 2 dia momba ny toetra amam-panahy mandroso isa amin'ny sarintany (mpandeha an-tongotra / takelaka) nefa enjehin'ny mpanohitra azy (polisy / matoatoa).
Fampahafantarana momba ny Pac-Man
Ny lalao tany am-boalohany, nanomboka ny valopolo sivy ambin'ny folo, dia iray amin'ireo efatra ambin'ny folo izay ampahany amin'ny fanangonana ny lalao avy amin'ny Tranombakoky ny zavakanto maoderina any New York.
Pac-Man no lalao voalohany nampidirina mekanika herinaratra vonjimaika amin'ny alàlan'ny singa iray. Ny hevitra dia nentanin'ny aingam-panahin'i Popeye tamin'ny epinara.
Samy manana ny toetrany ny mpanohitra tsirairay amin'ny lalao. Miharihary izany rehefa mijery ny anaran'izy ireo amin'ny teny Japoney isika: Oikake mena (Stalker), Mavokely Machibuse (Otrika), Manga manga (Tsy milamina) ary Voasary Otoboke (Stupid). Amin'ny teny anglisy, ireo anarana ireo dia nadika ho Blinky, Pinky, Inky, ary Clyde.
Na dia tsy misy farany aza ny lalao dia afaka manana lalao lavorary ianao. Misy ao mamita ambaratonga dimy amby dimam-polo amby roan-jato nefa tsy mamoy ny ainy ary manangona entana tsirairay ao amin'ilay lalao. Ho fanampin'izany, ny fampisehoana tsirairay dia tsy maintsy laniana amin'ny asa fanatanjahan-tena tsirairay.
Mba hanomezam-boninahitra ny franchise an'ny lalao, Google dia nanoratra tamin'ny kinova Pac-Man azo tsongaina tamin'ny faha-XNUMX taonan'ny lalao.